पुष्कर कार्कीलाई आईजीपी बनाउन रास्ट्रपतिले थालिन यस्तो कदम, माओवादीमा खैलाबैला !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
पुष्कर कार्कीलाई आईजीपी बनाउन रास्ट्रपतिले थालिन यस्तो कदम, माओवादीमा खैलाबैला !
काठमाडौं– सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले तीन दिनअघि छुट्टै भेला गरे । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल निवासमा भएको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले कसैसँग सल्लाह नै नगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको थियो ।
आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूको गुनासो र असन्तुष्टि धेरै भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्दै छन् । खासगरी सचिवहरूको सरुवामा माओवादी मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । एमालेलाई लेबी तिर्दै आएका सचिव प्रेमकुमार राईलाई गृहसचिव बनाइएपछि माओवादी मन्त्रीहरू झस्केका छन् । यस विषयमा गृहमन्त्री थापाले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई विस्तृतमा सबै कुरा राखिसकेका छन् । सोही विषय लिएर प्रचण्डले ओलीलाई भेट्न लागेका हुन् ।
चैत २९ गते नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक रिक्त हुँदैछ । उमेरहदका कारण नेपाली प्रहरीका आईजीपी प्रकाश अर्याल र सशस्त्रका आईजीपी सिंहबहादुर श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । सोही कारण दुवै प्रहरी संगठनमा कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच छलफल हुने बताइएको छ ।
नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा डीआईजी सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल, पुष्कर कार्की, धिरु बस्नेतबीच प्रतिस्पर्धा छ । आठ महिने कार्यसम्पादनको मूल्यांकनका आधारमा चारमध्ये एकजना आईजीपी बन्ने छन् । गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रको भागमा परेकाले प्रचण्ड र गृहमन्त्री थापाले चारमध्ये जसलाई बनाउन चाहन्छन्, उनै आईजीपी बन्ने निश्चित छ ।
तर, पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निकै दबाब दिन थालेको बुझिएको छ । भण्डारीले डीआईजी पुष्कर कार्कीलाई आईजीपी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिइरहेको एमाले स्रोतले बतायो । भण्डारी र कार्की नाताले दिदी भाइ हुन् । फुपूको छोरा भएकाले राष्ट्रपति भण्डारीले कार्कीलाई आईजीपी बनाउन धेरै प्रेसर दिएको बताइन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले जसरी पनि आईजीपी बनाउने भनेर ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि आइतबारदेखि डीआईजी कार्कीको ‘बडी ल्यांग्वेज’ नै फरक देखिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ ।